Ihe Baịbụl Na-ekwu | NWT
Ihe dị na Baịbụl bụ okwu Chineke ma ọ bụ ozi Chineke chọrọ ka anyị nụ n’oge a. Baịbụl gwara anyị otú anyị ga-esi ebi ndụ ka ndụ anyị nwee isi na ihe ndị anyị ga na-eme ka Chineke hụ anyị n’anya. Baịbụl zakwara ajụjụ ndị a:
1 Ònye bụ Chineke?
2 Olee otú ị ga-esi mara Chineke?
3 Ole ndị dere Baịbụl?
4 Ihe ndị sayensị chọpụtara hà dị iche n’ihe Baịbụl kwuru?
5 Gịnị ka Baịbụl na-ekwu?
6 Olee amụma ndị dị na Baịbụl gbasara Mezaya?
7 Olee amụma ndị dị na Baịbụl gbasara oge anyị a?
8 Ọ̀ bụ Chineke na-akpata ahụhụ ndị mmadụ na-ata?
9 Gịnị mere ndị mmadụ ji ata ahụhụ?
10 Olee ihe Baịbụl kwere anyị ná nkwa ga-eme n’ọdịnihu?
11 Gịnị na-eme mmadụ ma ọ nwụọ?
12 Ndị nwụrụ anwụ hà ga-adị ndụ ọzọ?
13 Gịnị ka Baịbụl kwuru gbasara mmadụ ịrụ ọrụ?
14 Olee ihe ị ga-eme ka ị ghara ịna-emefusị ihe i nwere?
15 Olee ihe ị ga na-eme ka ị na-enwe obi ụtọ?
16 Olee ihe ga-enyere gị aka ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị?
17 Olee ihe Baịbụl kwuru ga-enyere ezinụlọ gị aka?
18 Gịnị ka ị ga-eme ka gị na Chineke dị ná mma?
19 Gịnị dị n’akwụkwọ dị iche iche dị na Baịbụl?
20 Olee otú ị ga-esi na-agụ Baịbụl ka ọ baara gị ezigbo uru?
OTÚ Ị GA-ESI CHỌTA AMAOKWU NDỊ DỊ NA BAỊBỤL
Akwụkwọ ndị dị na Baịbụl dị iri isii na isii. E kere ha ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ Akwụkwọ Nsọ Hibru na Arameik (“Agba Ochie”), nke abụọ abụrụ Akwụkwọ Nsọ Grik (“Agba Ọhụrụ”). E kebiri akwụkwọ nke ọ bụla dị na Baịbụl n’isi n’isi nakwa n’amaokwu n’amaokwu. Ọ bụrụ na e dee aha akwụkwọ dị na Baịbụl, nọmba mbụ na-eso ya bụ isi ya, nọmba ọzọ na-eso ya abụrụ amaokwu ya. Dị ka ihe atụ, Jenesis 1:1 pụtara Jenesis isi mbụ, amaokwu mbụ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ihe Baịbụl Na-ekwu